कञ्चनपुरकि गोमा अटो चलाएरै सन्तानलाई डाक्टर बनाउन सफल भइन्! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > कञ्चनपुरकि गोमा अटो चलाएरै सन्तानलाई डाक्टर बनाउन सफल भइन्!
महेन्द्रनगर – कार्तिक–जीवनकालको ४२ औँ वर्षमा अटो चलाइरहेकी कञ्चनपुरकी गोमा (डगौरा) चौधरी अझै जीवन सङ्घर्षमय बित्ने बताउँछिन्। जब, पुर्नवास नगरपालिका अमर बस्तीबाट १६ वर्षको उमेरमा उनको भीमदत्तनगरपालिका २ भाषिका धनबहादुर चौधरी सँग विवाह भयो, कमजोर आर्थिक अवस्थाले जीवन जिउन नसकिने उनमा निराशा छायो। एकातिर घरपरिवार र कोखबाट जन्मिने सन्तानको भविष्यको विषयले औधी चिन्तित उनी ।
दुई सन्तानको अध्ययनको सिलसिला जारीरहेपछि उनले साइकल बाट मोटरसाइकलमा समेत मालसामान बोकिन्। कमाइको बचत बाट उनले ६ वर्ष पहिले अटो रिक्सा पनि खरिद गरेकी थिइन्। दुई सन्तानको भविष्य उज्ज्वलको कामना सहित उनी निरन्तर काममा खटिइन्। लगत्तै छोरी सरिताले स्टाफ नर्स कोर्स पुरा गरिन्। उनले लोकसेवा मार्फत अनमीमा नाम निकालिन्।